DAAWO MUUQAAL: Maxaa helay kulankii SOMALIA vs ERITREA ee Shalay lagu waday inuu ka dhoco MUQDISHO? – Gool FM
Byare February 18, 2019
(Muqdisho) 18 Feb 2019. Xulka 20-jirada Soomaaliya ayaa lagu waday in 14 ka ilaa 17-da bishan oo shalay ku beegneyd uu Magaalada Muqdisho ku marti galiyo dhigiisa Eritrea kulan saaxiibtinimo.
Yeelkeede, Agaasimaha warfaafinta xiriirka kubbada cagta Soomaaliya Shaafici Islow ayaa iminka ka dhawaajiyay in kulanka muddo gaaban dib loo dhigay inkastuusan carbaabin maalin gaar ah.
Islow ayaa sheegay in xiriirka kubbada cagta dalka ay ka go’an tahay sidii uu kulanka uga dhici lahaa Garoonka Benaadir balse ay iminka jawaab ka sugayaan xiriirka Eritrea si ay u soo gubiyaan taariikhda kale ay soo cago dhigan doonaan Soomaaliya.
Eritrea ayaa ka soo jawaabtay codsi kol hore ka soo gaaray Soomaaliya kaa oo ah inay labada xul ciyaar saaxiibtinimo ku yeeshaan Muqdisho iyagoona xaqiijiyay inay ciyaari doonaan 14-ka ilaa 17-da bisha.
Maadaama la soo dhaafay waqtigii ay qabsadeen, xiriirka Soomaaliya ayaa hadda sugaya jawaabtooda labaad iyo goorta ay imaanayaan Soomaaliya.
Goobjoog oo Mataane la ah GoolFM ayaa warbixin ka soo diyaarisay sheekadan.